कोरल Domina खाडी एल सुल्तान5* - "। एक हजार र एक रातों" केही महलों र मनोरञ्जन, को पृष्ठ देखि descended भने यो पर्यटक सेवा, पहिलो-वर्ग सान्त्वना र उत्कृष्ट पूर्वाधार सबै आधुनिक प्रकार संग नयाँ जटिल छ। हामी यस होटल सबैभन्दा मांग ग्राहकहरु पूरा हुनेछ भनेर भन्न सकिन्छ। होटल समुद्र तट, आफ्नो शरीर किनारमा फेला - केही स्पष्ट, समुद्र नजिकै केही। साथै, तिनीहरूले ध्यान दिएर tended गरेर, पार्क को greenery कमै मात्र छन् पछ्याए। होटल प्रसिद्ध इटालियन लाइन "Domina" पर्छ। यसलाई आराम यसको आफ्नै अवधारणा अफ्रिकी देश धेरै परिचित छैन छ।
Sharm रूपमा fondly, पर्यटक भनिन्छ
शानदार कोरल रंग यो मिश्रको रिसोर्टमा Divers लागि मात्र होइन एक स्वर्ग, तर पनि समुद्र तट मा आराम गर्न आदर्श ठाँउ हो। कि "छाप मा" भनिन्छ जो। निर्माण किन बस एक समुद्र तट होटल, तर सम्पूर्ण शहर र धनी vacationers को महलों छ भन्ने छ। Domina कोरल खाडी एल सुल्तान5जस्ता *। यस होटल बारेमा समीक्षा यसलाई समुद्री र Sunbathing लागि मिश्र आउन गर्ने पर्यटकहरुका लागि सबै भन्दा राम्रो समाधान मध्ये एक भनेर सुझाव।
यात्रा कम्पनीहरु Sharm गर्न उड्यो जब रिसोर्टमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल गर्न चार्टर उडान सबै रूस देखि आए। देश को केन्द्रीय क्षेत्रका औसत उडान समय बारे चार र आधा घण्टा भएको थियो। तर यात्री 'प्याकेज पर्यटन' त्यसैले आउनुहोस्। स्वतन्त्र पर्यटकहरु कायरो उड सक्छ, र त्यहाँबाट शर्मा आन्तरिक रेखा वा बसें पुग्न। होटल Domina कोरल खाडी एल सुल्तान5* रास Nazran को विमानस्थलबाट छ किलोमिटर स्थित छ, तर बन्द vacationers लिएर विमानहरु को हल्ला हस्तक्षेप गर्दैन। वातानुकूलित शटल बस दस मिनेट लागि पर्यटकहरु हुनेछ। चार किलोमिटर लागि होटल, एउटै पहुंच र प्रसिद्ध Naama खाडी बाट रिसोर्टमा केन्द्र।
को Domina कोरल खाडी एल सुल्तान5* धेरै ठूलो इलाका। यसको क्षेत्र - लगभग एक सय वर्ग किलोमिटर। यहाँ, समुद्र फरक दूरी मा, लेन alleys, flowery pergolas र रसीला ट्रपिकल रूखहरू हुन् को Resort को भाग आठ होटल। तिनीहरूलाई प्रत्येक यसको आफ्नै नाम छ: "सुल्तान", "पुर", "ओएसिस", "Elisir", "Aquamarine", "प्रेस्टिज" र यति मा। निजी विला पनि छन्। सबै विराजमान कागती, दारिम, नेभाराको - मरुभूमिमा एक वास्तविक उद्यानलाई! होटल "एल सुल्तान" पाँच सुन्दर भवनहरु हुन्छन्। होटल कार पार्क, पसलहरूमा संग सपिङ्ग आर्केड, साथै सेमिनार लागि डिजाइन सात बैठक कोठा छ। र पर्यटकहरु सम्पूर्ण जटिल वरिपरि सार्न सक्छन् भनेर, पाँच मार्गहरू मिनी-बसें र कार, थाई (hereinafter ट्याप गर्नुहोस्-tafami रूपमा उल्लेख) "tuk-tuk" जस्तै प्लाई। तिनीहरूले एक घण्टा को हरेक चौथाई चलाउनुहोस्। "सुल्तान" शटल नम्बर4र5यात्री इलाका गुम्यो रही बच्न मा आगमन नक्शा होटल गरेको स्वागत लिन सल्लाह छन्। तथापि, सबै रेस्टुरेन्ट, समुद्र तट र Resort होटल अतिथि को पूल को "सुल्तान" प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। के बिल्कुल टिकट मा समावेश गरिएको छ, हामी तल वर्णन गर्नेछ।
होटल Domina कोरल खाडी एल सुल्तान5* आराम लिन तयार तीन सय र सत्र कोठा। तिनीहरू सबै "पाँच-स्टार" होटल स्थिति पूरा। वातानुकूलन, टिभी "फिलिप्स" उपग्रह च्यानल, मिनी-पट्टी, सुरक्षित, आधुनिक बाथरुम - - मुख्य उपकरण कोठा बाहेक कोठा जीवित क्षेत्र, एक बेडरूम, एक सोफा र एक बालकनी छ। को भवन को सबै भन्दा समुद्रलाई गरिएका, र केही कोठा अरूलाई पार्क र स्विमिंग पूल देखेको बेला Tiran द्वीप को दृश्य आनन्द उठाउन सक्छौं। कुर्सियाँ, तालिका र ऐशट्रे - को बालकनी मा। काठ फर्नीचर, सहज बेड, त्यहाँ लुगा लागि धेरै विशाल लकर छन्। कोठा विशाल र आरामदायक एकै समयमा हो। प्रयोग संग replenished बाथरूम मा साबुन र स्याम्पु। मिनी पल्ट को लागि नै जान्छ। हरेक दिन पानी polutoralitrovye दुई बोतल र Carbonated पेय पदार्थ चार डिब्बे राखे।
यो "सबै समावेशी"
को Resort Domina कोरल खाडी एल सुल्तान5* (Sharm एल शेख) मा भोजन पनि अनुभवी अतिथि धेरै मिश्रको "फाइभ्स" ईर्ष्या। यी होटल को सबै भन्दा मा हुन्छ रूपमा, छैन मात्र मुख्य रेस्टुरेन्ट "कोरल" को लागि खान सक्छ। सिद्धान्त, तपाईंले भर्खरै खातामा समय र मूल्य निर्धारण गर्न आवश्यक कुनै पनि होटल Resort भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ खान। नाश्ता "Plaisir" रेस्टुरेन्ट मा सेवा छ, तर तपाईं सुत्न लामो समय चाहनुहुन्छ भने, तपाईं पूल मा एक लेट भोजन आनन्द उठाउन सक्छौं। भू-मध्य भोजन मा विशेषज्ञता, "वाडी गँगटो माछा बजार अन्त्य", र "Nautilus" - खाजाका लागि, तपाईं माछा दुई ठाउँमा भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। इटालियन भोजन प्रेम को trattoria "ला Piazzetta" मा दिन को समयमा खान सक्छ। खाने को लागि रूपमा, त्यहाँ संस्थाहरु को विकल्प भारी छ। पहिले नै माछा रेस्टुरेन्ट उल्लेख, steykhauz "Petrus" मासु प्रेमीहरूको लागि, "Plaisir" एक उत्कृष्ट वाइन सूची संग, मोरक्कन मधुशाला "अल Tajin Gambro कुना" - आफ्नो निपटान मा सबै। खाने पनि मा संस्थाहरू "सुल्तान" र "ला Piazzetta" र एक rotisserie खुवाउनुभयो "एल Mastaba Kebab हाउस।" पूल मा र समुद्र तट मा खाजा बारहरू समग्र शक्ति आपूर्ति प्रणाली र रेस्टुरेन्ट नै नाम को अतिथि 'सुल्तान' मात्र रेस्टुरेन्ट र "कोरल" को लागि नि: शुल्क देखि समावेश छन्। यो पनि तुरुन्तै पत्ता गर्नुपर्छ पट्टी, विशेष गरी पेय संग, कुनै पनि असजिलोपन जोगिन, नि: शुल्क तपाईं राख्नु ठीक के। अब खाना लागि। मासु - बिस्तारै पकाएको मासु, पाठो, धुनमा, चिकन, टर्की। स्वादिष्ट माछा र समुद्री एक धेरै। पेस्ट्री र मिठाईहरू बस आफ्नो मुखमा ढल्छ। तालिका मा त्यहाँ मिति, एक खरबुजा, cantaloupe, आडू, अंगुर दाख सधैं छ।
मनोरञ्जन र सेवा
होटल Domina कोरल खाडी एल सुल्तान5* (मिश्र) बीस-चार घन्टा एक दिन स्वागत काम। प्रत्येक मामलामा अतिथि को आफ्नो दर्ता छ। होटल लाँड्री र सुक्खा सफाई, तपाईं rubles स्थानीय पाउन्ड मा कुराहरू भण्डारण लागि विशेष कोठा मा आदान प्रदान र पारित गर्न सक्छ प्रदान गर्दछ। छैन भूल र खेल प्रेमीहरूलाई: टेनिस, गल्फ बल, गोल्फ कोर्स - सबै यहाँ पाउन सकिन्छ। पनि घोडा चढ्नु गर्न सिकाउनुभयो जहाँ एक विशेष स्कूल, खोल्नुहोस्। तथापि, जिम र फिटनेस सेन्टर - भुक्तानी। त्यहाँ एक लक्जरी स्पा छ, तर मूल्यहरु पाहुनाहरूको अनुसार, उच्च हो। समुद्र तट मा तपाईं पनि भलिबल डाइभिङ र स्नर्केलिंग आनन्द उठाउन सक्छौं। बच्चाहरु त्यहाँ बच्चाहरु को लागि एक क्लब छ, सुरक्षित खेल मैदान छ। डिस्को, क्यासिनो जुवा सार्वजनिक रुचि "अलाड्डीन," यो साँझमा, rattles र अझै त्यहाँ अब एक क्याबरेट छ - "। Smaliyas क्लब" वाइफाइ को कोठा मा र समुद्र तट मा, पूल द्वारा, सामान्य मा, सबै क्षेत्रमा छ। तर सबै को सबै भन्दा राम्रो हल भवन नजिकै परिहाल्छ। एनिमेटरहरू पूल वा समुद्र तट मा दिन को समयमा अतिथि रम्न, साँझ शो को क्याफे "मोशाको" वा विशेष क्षेत्र, मा आयोजना गरिन्छ "स्वर्गदूत।" टेबल र कुर्सियों बरु stuffiness देखि बचाउँछ एक छत भन्दा, चरण तल ledges र क्यानभास चदंवा शीर्ष भनेर यो रंगशालामा निर्माण गरिएको छ। धेरै सुन्दर दृश्यहरु, शक्तिशाली संगीत र प्रकाश उपकरण। विशेष शो, "Elvis जीवित छ", "क्लियोपेट्रा" र प्रशंसा "Maykl Dzhekson।"
मेहमान होटल Domina कोरल खाडी एल सुल्तान5* यसको सेवा दावा भन्छन्। साँच्चै, अतिथि सेवा उच्चतम स्तर मा छ। शायद किनकी इटालियन व्यवस्थापन, यहाँ केही टिप्पणीहरू फैशनेबल युरोपेली छुट्टी लाग्यो। पर्यटकहरु कर्मचारी छ कि यस्तो आतिथ्य, केही ठाउँमा मिश्र पाउन सकिन्छ। तपाईंको हरेक इच्छा पूरा, प्रस्थान दिन साँझ मा खुवाइन्छ, र तपाईं, नुहाउनु गर्न त कोठा गर्न कुञ्जीहरू दिन चाहनुहुन्छ भने। तपाईं भूल वा इलाका महंगा कुरा गुमाउन भने, चिन्ता छैन। कर्मचारीहरु तपाईं सुरक्षित र ध्वनि गर्न दिनुहुनेछ। एनिमेसन अचम्मको सक्रिय मान्छे गर्न केही छ। टोलीमा रूस र इटालियनहरू दुवै छ। कसरत, एरोविक्स, नृत्य, साँझ - शो, प्रदर्शन र प्रतियोगिताहरु। छैन पट्टाइ, मलाई विश्वास हुनेछ!
समुद्र र पूल बाँकी
पानी मा समय खर्च - यो पर्यटकहरूले Domina कोरल खाडी एल सुल्तान5* मा लालसा गर्ने मुख्य कुरा हो। लगभग दुई किलोमिटर लम्बाइ मा - फोटोग्राफी lodgers हामीलाई एक विशाल समुद्र तट देखाउन! - र तीन ठूलो स्विमिंग पूल। निस्सन्देह, छाते, सूर्य बेड, तौलिया शुल्क उपलब्ध मुक्त छन्। र तपाईं समुद्र वा स्विमिंग पूल मा Sunbathing छन् कि बिना। सूर्य बेड तपाईं आफ्नो टाउको लुकाउन सक्नुहुन्छ जो अन्तर्गत विशेष canopies, छ। को सर्फ विशेष lounges छ। तर सम्झना पर्छ भनेर एउटा कुरा छ। तौलिया तिनीहरू खिचिएको ठाउँमा फिर्ता हुन आवश्यक छ। गोले, पानी गर्न घनिष्ठ छन् जो, आफ्नै तटों छ। तिनीहरूलाई प्रत्येक केही सुविधा को घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग सबै होटल जो देखि तपाईं Corals पराउँछु सक्नुहुन्छ घट्दो, pontoons छ। र समुद्र तट "सुल्तान" विशेष छ मा, बच्चाहरु खण्ड लागि खाली गरियो। परिसर को मुख्य तट मा - पौडी खेल्न सक्ने छैन मान्छे को लागि एक विशेष खण्ड, तर तिनीहरूले समुद्र मा पौडी खेल्न चाहन्छु। केन्द्रीय pontoon मा - डुबुल्की मार्न एक इनडोर स्विमिंग पूल, प्रशिक्षित जुन। समुद्र मा, सुन्दर माछा धेरै। पर्यटकहरु अक्सर स्विमिंग पूल धाउन मौका छैन, भन्ने गुनासो किनभने समुद्री जीव को एक मास्क लगाएको घडी। समुद्र तटों देखि नौ हूँ छ बजे गर्न चलाउनुहोस्।
होटल Domina कोरल खाडी एल सुल्तान5* (मिश्र, Sharm el-शेख) नजिक को रिसोर्ट को किनमेल केन्द्र स्थित छ। निस्सन्देह, होटल मा नै पनि पसलहरूमा, र एक सुपरमार्केट छ, तर पर्यटक अझै पनि पुरानो शहर वा Naama खाडी मा Resort र किनमेल बाहिर प्राप्त गर्न सल्लाह छन्। यहाँ तपाईँले राम्रो कपास अंडरवियर, टी-शर्ट र वस्त्र खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। कपडा गुणस्तर र मूल्यहरू रूसी भन्दा कम। उत्पादनहरु को जाभा फुल, पहेंलो चिया, कफी र मसाले, विशेष गरी अलैंची ध्यान। उच्च गुणस्तरीय छाला को एक धेरै - युरोपेली ब्रान्ड र स्थानीय उत्पादनहरु को "प्रतिहरू" जस्तै। लोकप्रिय एक स्थिर गन्ध संग उच्च गुणवत्ता खुशबूदार तेल हो। र कुनै आश्चर्य, किनभने यो अक्सर मिश्री सामाग्री प्रयोग गरिएको छ युरोपेली कम्पनीहरु आत्माहरू उत्पादन लागि चिरपरिचित।
Domina कोरल खाडी एल सुल्तान5* (मिश्र) होटल bezvylazno गर्ने यसको क्षेत्र मा बस्नेछ मात्र होइन मान्छे लाग्छ। यो पनि यात्राहरु लागि एक उत्कृष्ट सुरूवात विन्दु हो यो सिनाई प्रायद्वीप, इजरायल, जोर्डन। को शर्मा सेन्ट क्याथरीन को विहारको मा, कायरो वा Luxor गर्न विमान जान सक्नुहुन्छ रास मोहम्मद, रंग र सेतो क्यानोन, Nabq, अबू Galum सहित रिजर्व, मोशालाई पहाड चढ्नु उठयो, मरुभूमि सफारी ले, जाने उँट सवारी, डुङ्गा मा एक सवारी, Tiran को द्वीप सहित। होटल यात्रा कम्पनीहरु, तपाईंले यी सबै रोमाञ्चक यात्राको बनाउन सक्छ जो संग को एक किसिम प्रदान गर्दछ।
कोरल Domina खाडी एल सुल्तान5* (Sharm एल शेख): समीक्षा
फैशनेबल समुद्र तट, प्रचण्ड सेवा, धेरै सुन्दर र विचार-बाहिर क्षेत्र, उत्कृष्ट एनिमेशन र साँझ मनोरञ्जन, वाइफाइ होटल भर, र पनि, हामी आश्वासन दिए रूपमा, पानी अन्तर्गत - यस होटल पर्यटकहरु द्वारा बाँया छाप छन्। यो मूल्य श्रेणी मा Sharm मा सबै भन्दा राम्रो भनिन्छ। यो एक होटल मानिसहरू छुट्टी अतिथि कसरी बनाउने पनि अधिक आकर्षक सोच्न जहाँ एक शहर हो। यसलाई आफ्नो दिल कामनाहरु सबै कुरा छ। को कोठा मा उपकरण राम्ररी काम गरिरहेको छ। गहिरो दृश्यात्मक केही मिटरसम्मको - समुद्र तट सफा छ मा, बेड सधैं मुक्त, पारदर्शी समुद्र हो। होटल सामान्यतया साथीहरू र परिचितहरू गर्न सिफारिस गरिएको छ। अन्य होटल बीच Resort समीक्षा किनभने यसको भवन "सुल्तान" विशेष गरी भेद र रेस्टुरेन्ट, समुद्र र animated शो को रंगशालामा बन्द गर्नुहोस्। र आफ्नो रेस्टुरेन्ट मा खाना राम्रो। त्यहाँ दुई तटों छन्।
जेट एयरवेज - शीर्ष दस मा
"Ararat पार्क हयात" (मास्को): कोठा र पूर्वाधार विवरण
Anabolic हर्मोन: लागूऔषधको सूची
विचारै को पावर
अवकाश मा के गर्न? सेवानिवृत्त लागि रोजगार। वरिष्ठ लागि पाठ्यक्रम